Mozika reggae: manomana ny vokatra voalohany ny Steve Madagascariensis | NewsMada
Mozika reggae: manomana ny vokatra voalohany ny Steve Madagascariensis
Tarika niorina, folo taona lasa izay teto an-dRenivohitra, ny Steve Madagascariensis, ahitana mpikambana enina mirahalahy : Ramariavelo Steve na i Jah Steve (mpihira sy mpamoron-kira), i Dago Dubration Band (mpitendry gitara), i Mamy Gladiator (mpively ampongamaroanaka), i Dadz Lion (mpitendry gitara beso), i Trix (mpitsoka sax) ary i Tax (mpitendry vatamaroafitsoka).
Mifototra amin’ny “roots”, “reggae”, “dub”, “ragamuffin”, “dancehall” ary ny “world music” ny mozika lalaovin’izy ireo. Noho izany fironana izany, miainga avy amin’ny zava-misy eo amin’ ny fiainan’ny fiarahamonina sy ny rivotra politika ary ny fomba amam-panao malagasy ny hafatra entin’ny Steve Madagascariensis. Voizin’izy ireo manokana ny fandriampahalemana sy ny fifankatiavana.
Tanjon’ny tarika ny hahatonga izany hafatra izany ho tafita sy hanerana izao tontolo izao. Maromaro ny dingana efa vita ary sehatra efa niakaran-dry Jah Steve. Anisan’ izany ny tany amin’ny “Fianar Reggae festival”, ny “Unity concert”, ny “International reggae day”, sns. Amin’izao fotoana izao, ao anatin’ny fanomanana ny vokatra voalohany ny tarika. “Miandry fa gasy” ny lohatenin’io rakikira vaovao io.